Momba anay - Ningbo Ameida Technology Co., Ltd.
Ningbo Ameida Technology Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2016 tamin'ny alàlan'ny andiana tovolahy maniry fatratra. Rehefa avy niangona nandritra ny taona maro ny indostrian'ny milina fanapahana dia manana fahatokisana izahay handray anjara amin'ny indostria maoderina sinoa, ary manantena ny hitarika amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny ezaka ataontsika. varotra sy aorian'ny serivisy an'ny fitaovana mandeha ho azy CAD / CAM.
Ameida dia misy andiana injeniera matihanina sy mpitantana, izay nahavita zava-bita miavaka tamin'ny sehatry ny milina, elektronika, rindrambaiko ary fitantanana. Anisan'ireny, profesora mpiara-miasa 1 zokiny, 1 mari-pahaizana doctorat, ary tompona mari-pahaizana 2, ary nandefa fiaraha-miasa amin'ny oniversite toa ny Oniversite Zhejiang of Technology izy ireo.
Ameida dia nifantoka tamin'ny famokarana milina fanapahana lamba fisaka, milina fanapahana modely akanjo, milina fanapahana baoritra, rafitra fanapahana mandeha ho azy eo amin'ny sehatry ny dokam-barotra, milina fanapahana sarimihetsika nomerika, milina fanapahana sosona tokana, sns. Ireo vokatra dia be mpampiasa amin'ny fanapahana ary ny famokarana akora azo ovaina sy akora mitambatra. Kiraro, akanjo, valizy, baoritra, hoditra, dokam-barotra, sofa, seza fiara, akora mitambatra, elektronika ary indostria hafa. Nahazo patanty nasionaly sy zon'ny mpamorona rindrambaiko ny vokatra sy ny haitao ary nahazo mari-pahaizana CE. Manantena ny ho avy, Amada dia hiziriziry amin'ny fanamafisana hatrany ny fanavaozana ny teknolojia, ny fanavaozana ny fitantanana ary ny fanavaozana ny varotra ho fototry ny rafitra fanavaozana, ary hiezaka ny handray anjara amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny fanapahana manan-tsaina!
Ny fanapahana ny fahamendrehana sy ny fahamendrehana, ny vidiny mirary ary ny fahombiazana avo lenta no tadiavinay, ary ny fanampiana ara-teknika manara-maso dia ampahany lehibe amin'ny asanay, manao izay fara herinay hanohanana ny mpanjifanay rehetra hahazo ny traikefa manokana ampiasainy manokana.
Izahay koa manizingizina ny toetra tsara toy ny etsy ambany:
Ny toetra mampiavaka azy voalohany dia ny mahasahy misitrika, sahy manandrana, sahy mieritreritra ary manao.
Ny fahamendrehana amin'ny Fahamarinana-manohana no tena mampiavaka ny Jinyun Laser.
Manambola yuan an-jatony tapitrisa isan-taona amin'ny fampiofanana ho an'ny mpiasa, manangana cantine ho an'ny mpiasa ary manome sakafo telo isan'andro isan'andro ho an'ny mpiasa.
Ataovy izay tsara indrindra vitantsika
Manana fahitana tsara i Wanda, mitaky fenitra ambony dia avo amin'ny asa, ary manenjika ny "fanaovana ny asa rehetra ho vokatra tsara."